Izwe LikaNkulunkulu Lokubalekela! Indlu yonke e-Turtle Lake - I-Airbnb
Izwe LikaNkulunkulu Lokubalekela! Indlu yonke e-Turtle Lake
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kayla
U-Kayla Ungumbungazi ovelele
Itholakala enhliziyweni yezwe likaNkulunkulu, le khabhinethi eqhelelene kahle ihlezi kumahektha ayi-8 angasese. Inamakamelo okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-2 agcwele, ikhabethe lethu laseNorthwoods linikeza imindeni emikhulu indawo eningi yokusabalalisa. Yakhelwe phezu kwetheku elingalodwa eduze neTurtle Lake, ujabulele ukubukwa okumangalisayo kwasentshonalanga kwelinye lamachibi acwebe kakhulu eMinnesota. Noma ngabe ujaha indebe yomlomo omncane, uhamba ngamabhodi ethu okugwedla, noma uzipholele ngaseziko, ikhabethe lethu likunikeza indawo ekahle yokubaleka!
Ikhabethe lethu ngokuziqhenya liziqhayisa ngo-2,00sq ft wolimi nezindonga zemifula kanye nophahla oluvalekile olunamapulangwe amahle aphansi anikeza wonke amavayibhu aseNorthwoods ongawathemba.
Isitezi esikhulu sinekamelo lokulala elinombhede wendlovukazi, igumbi lokuhlala elineziko, igumbi lokugezela eligcwele, nekhishi elihlome ngokuphelele kanye nendawo yokudlela.
Phezulu phezulu uzothola i-loft ebheke egumbini lokuhlala enokubukwa kwechibi. I-loft ifakwe ngokuphelele nge-tv kanye nesofa lokudonsa. Ngokushesha ukusuka phezulu kunegumbi lethu lokulala lesibili elinombhede olingana nenkosi.
Indawo yethu engaphansi kwe-walkout inikeza izivakashi igumbi lomndeni elinesofa lokudonsa, indawo yomlilo kanye nombono omuhle echibini. Eduze negumbi lomndeni kunegumbi lethu lesithathu lokulala elinewele phezu kombhede ogcwele. Isitezi esingaphansi sihlanganisa negumbi lokugezela eligcwele, kanye negumbi lokusetshenziswa elinewasha / isomisi kanye nefriji lesibili.
4.95 · 38 okushiwo abanye
Ikhabethe lethu litholakala imizuzu engu-6 ngaphandle kwase-Marcell emgwaqeni oyimfihlo ocezile. I-Marcell inikeza ipaki elincane elinezinkantolo zethenisi nezindlela zokuhamba. Kukhona nekhefi elincane elihle e-Marcell elibizwa nge-Pine Cone Soup & Sandwich Cafe, elinikeza yonke into kusukela ekudleni kwasekuseni okunezinhliziyo kuya kwezimnandi izigaxa zika-ayisikhilimu!
Yize singahlali eduze, sisele kuphela ucingo noma umbhalo ekukusizeni ngesikhathi uhlala. Sicela ungangabazi ukuxhumana nanoma yimiphi imibuzo emini noma ebusuku.
UKayla Ungumbungazi ovelele